Mukoma nemunin’ina vasina kutendeka (1-49)
Ohora akaita chipfambi neAsiriya (5-10)
Ohoribha akaita chipfambi neBhabhironi neIjipiti (11-35)
Vakadzi vacho vaviri vanorangwa (36-49)
23 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, paiva nevakadzi vaviri vakaberekwa naamai vamwe chete.+ 3 Vakava pfambi kuIjipiti+ uye vakatanga chipfambi chacho vari vadiki. Mazamu avo akabatwa-batwa ikoko, uye zvipfuva zvepaumhandara hwavo zvakapuruzirwa ikoko. 4 Mukuru wacho ainzi Ohora* uye munin’ina wacho ainzi Ohoribha.* Vakava vangu, vakabereka vanakomana nevanasikana. Kana ari mazita avo, Ohora iSamariya,+ uye Ohoribha iJerusarema. 5 “Ohora akatanga kuita chipfambi paaiva wangu.+ Akachiva vaya vaimuda kwazvo,+ ivo vavakidzani vake vaAsiriya.+ 6 Vaiva magavhuna aipfeka zvebhuruu uye vatevedzeri vevatongi. Vese vaiva majaya akanaka, aiva pamabhiza awo. 7 Akaramba achiita upfambi nevanakomana vese veAsiriya vakanaka kwazvo, uye akazvisvibisa+ nezvidhori zvinosemesa* zvevaya vaaichiva. 8 Haana kurega upfambi hwaaiita kuIjipiti, nekuti vakanga varara naye achiri mudiki, uye vakapuruzira chipfuva chepaumhandara hwake uye vakapedzera shungu dzavo paari.*+ 9 Saka ndakamuisa mumaoko evaya vaimuda kwazvo, ivo vanakomana veAsiriya+ vaakanga achiva. 10 Vakamubvisa zvipfeko,+ vakatora vanakomana vake nevanasikana vake,+ uye vakamuuraya nebakatwa. Akaita mbiri yakaipa pakati pevamwe vakadzi, uye vakamuitira zvaakatongerwa. 11 “Munin’ina wake Ohoribha paakazviona, ruchiva rwake rwakabva rwatowedzera, uye akaita chipfambi chinopfuura chemukoma wake.+ 12 Akachiva vavakidzani vake ivo vanakomana veAsiriya,+ magavhuna nevatevedzeri vevatongi vainge vakapfeka zvakanaka kwazvo vari pamabhiza, vese vari majaya akanaka kwazvo. 13 Paakazvisvibisa, ndakaona kuti vakadzi vaviri ava vakafamba nenzira imwe chete.+ 14 Asi akaramba achiwedzera chipfambi chake. Akaona mifananidzo yevarume yakaita zvekutemerwa pamadziro, iyo mifananidzo yevaKadheya yaiva neruvara rutsvuku, 15 vakasunga mabhandi muchiuno, vakapfeka ngowani* hombe, vachiratidzika sevarwi, uye yese zvayo yaiva yevanhu vekuBhabhironi, vakaberekerwa munyika yevaKadheya. 16 Paakangoona mifananidzo yavo, akatanga kuvachiva, akatuma nhume kuvarume vacho vekuKadheya.+ 17 Saka vanakomana vekuBhabhironi vakaramba vachiuya pamubhedha wake vachirara naye, uye vakamusvibisa neruchiva rwavo.* Pavakanga vamusvibisa, akasemeswa navo akavasiya. 18 “Paakaramba achiita upfambi hwake asingatombonyari uye achiratidza vanhu muviri wake,+ ndakamusiya nekuti aindisemesa, sekusiya kwandakaita mukoma wake andisemesa.+ 19 Akaramba achiwedzera chipfambi chake+ achifunga mazuva aaiva mudiki, paaiita upfambi munyika yeIjipiti.+ 20 Akavachiva sezvinoita varongo* vevarume vane nhengo dzakaita sedzemadhongi uye vane nhengo dzakaita sedzemabhiza. 21 Mwoyo wako wakadokwairira zvinhu zvakafumuka zvawaiita uchiri mudiki kuIjipiti+ pavaibata-bata chipfuva chako, iwo mazamu epaudiki hwako.+ 22 “Saka iwe Ohoribha, zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndiri kuita kuti upandukirwe nevadiwa vako+ vawakasema ukavasiya, uye ndichavaunza kuti vakurwise vachibva kwese kwese,+ 23 vanakomana vekuBhabhironi+ nevaKadheya vese,+ varume vekuPekodhi+ neShoa neKoa, pamwe chete nevanakomana vese veAsiriya. Vese zvavo majaya akanaka uye magavhuna nevatevedzeri vevatongi, varwi vakaita zvekusarudzwa, uye vese vari pamabhiza. 24 Vachakurwisa vaine ngoro zhinji dzehondo dzine ruzha, nemauto akawanda chaizvo, vaine nhoo huru nenhoo diki* nengowani. Vachakukomba kumativi ese uye ndichavapa mvumo yekukutonga, uye vachakupa mutongo wavanoda.+ 25 Ndichakuratidza hasha dzangu, uye ivo vachakurwisa vakashatirwa. Vachakudimbura mhino nenzeve, uye vanhu vako vanenge vasara vachaurayiwa nebakatwa. Vachatora vanakomana vako nevanasikana vako, uye vanenge vasara vachapiswa nemoto.+ 26 Vachakubvisa zvipfeko,+ votora zvishongo zvako zvakanaka.+ 27 Ndichagumisa mabasa ako akafumuka neupfambi hwako+ zvakatangira munyika yeIjipiti.+ Ucharega kuvatarisa uye uchakanganwa Ijipiti.’ 28 “Nekuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndava kuda kukuisa mumaoko evaya vaunovenga, vaya vawakasiya, wasemeswa navo.+ 29 Vachakuratidza ruvengo uye vachatora zvinhu zvako zvese zvawakabudira ziya,+ vokusiya usina kupfeka. Unzenza hunonyadzisa hwawaiita usina kupfeka, nemabasa ako akafumuka nechipfambi chako zvichafumurwa.+ 30 Uchaitirwa zvinhu izvi nekuti wakatevera mamwe marudzi sepfambi,+ uchizvisvibisa nezvidhori zvawo zvinosemesa.+ 31 Wakatevedzera mukoma wako,+ uye ndichaisa kapu yake muruoko rwako.’+ 32 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Uchanwira mukapu yakakura yemukoma wako,+Uye uchasekwa woshorwa, nekuti ndizvo zvakazara mukapu yacho.+ 33 Uchapera nekudhakwa uye ucharwadziwa zvisingaiti.Ichange iri kapu yezvinotyisa uye yekuparadzwa,Kapu yemukoma wako, Samariya. 34 Uchatoinwa woipedza yese,+ uye uchan’en’ena zvimedu zvayo zvevhuWobva wadzura mazamu ako. “Nekuti ini pachangu ndataura,” ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.’ 35 “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Zvawakandikanganwa, usingambondiverengi,*+ uchatambura nemhaka yemabasa ako akafumuka uye upfambi hwako.’” 36 Jehovha akabva ati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, uchataura here mutongo waOhora naOhoribha+ wovaudza zvinhu zvinosemesa zvavakaita? 37 Vakaita upombwe,*+ uye maoko avo ane ropa. Havana kungoita upombwe nezvidhori zvavo zvinosemesa asi vakaitawo kuti vanakomana vavakandiberekera vapfuure nemumoto vachivaita zvekudya zvezvidhori zvavo.+ 38 Izvi ndizvo zvimwe zvavakandiitira: Vakasvibisa nzvimbo yangu tsvene zuva iroro, uye vakasvibisa masabata angu. 39 Pavakapedza kuuraya vana vavo vachivabayira kuzvidhori zvavo zvinosemesa,+ vakabva vapinda munzvimbo yangu tsvene pazuva iroro kuti vaisvibise.+ Ndizvo zvavakaita mumba mangu chaimo. 40 Vakatotumirawo nhume kunotora varume vekure.+ Pavakanga vachiuya, wakageza ukapenda maziso ako, ukapfeka zvishongo.+ 41 Wakagara pamubhedha wemaoresa waiva netafura+ pamberi pawo,+ uye wakagadzika rusenzi+ yangu nemafuta angu pairi.+ 42 Ruzha rwevarume vaifara rwainzwika imomo, uye pakati pavo paiva nezvidhakwa zvakatorwa kurenje. Vakaisa zvishongo mumaoko evakadzi vacho nekorona dzakanaka mumisoro yavo. 43 “Zvino ndakataura nezveuya akanga asakadzwa neupombwe ndichiti: ‘Acharamba achingoita upfambi hwake.’ 44 Saka vakaramba vachipinda maaiva sezvinoita munhu anoenda kupfambi. Ndiwo mapindiro avaiita maiva naOhora naOhoribha, vakadzi vanoita zvakafumuka. 45 Asi varume vakarurama vachamupa mutongo unofanira kupiwa mhombwe+ uye vanodeura ropa;+ nekuti imhombwekadzi, uye maoko avo ane ropa.+ 46 “Nekuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Pachaunzwa uto richavarwisa kuti vave chinhu chinotyisa uye chekupamba.+ 47 Uto racho richavatema nematombo+ uye richavacheka nemapakatwa aro. Richauraya vanakomana vavo nevanasikana vavo,+ uye richapisa dzimba dzavo nemoto.+ 48 Ndichaita kuti zvinhu zvakafumuka zvipere munyika yacho, uye vakadzi vese vachadzidza chidzidzo vorega kutevedzera maitiro enyu akafumuka.+ 49 Vachakurangai nemhaka yemaitiro enyu akafumuka uye zvivi zvamakaita nezvidhori zvenyu zvinosemesa; uye muchaziva kuti ndini Changamire Ishe Jehovha.’”+
^ Kureva kuti “Tende Remukadzi Uyu.”
^ Kureva kuti “Tende Rangu Riri Maari.”
^ Kana kuti “vakaita upombwe naye.”
^ Kana kuti “neupombwe hwavaiita naye.”
^ ChiHeb., “ukandirasira shure kwako.”
^ Kureva, upombwe hwekunamata.